Iran Aseman burburay
Iran Aseman burburay sano 2 4 bilood ka hor #991
Tehran (Alshahid) -Maxkamad ku taala magaalada Tehran ee dalka Iran ayaa ku dhawaaqday inay si deg deg ah u joojisay duulimaadkii ay la lahayd dalka Iran.
Duulimaadyada diyaaradda ayaa waxay ahaayeen rakaabkii 60, laba ka mid ah shaqaalihii rakaabka ahaa, labo ka mid ah shaqaalaha shaqaalaha ah iyo laba sarkaal oo amniga ah.
Mount Dena waa xadka buurta 80 km oo leh heer sare oo sareeya ee 4,409 m (14,465 ft). Waxay ku taallaa waqooyiga of Yasuj. Xaaladaha cimilada ee goobta shilalka waxaa ka mid ah baraf iyo dabayl xoog leh, oo wax u dhimaya adeegyada goobidda iyo samatabbixinta.